နနျးစု – My Blog
မွို့ပွရဲ့မှနျးကပျြမှုနဲ့အတူ ရုံးကအပွနျ ဘတျဈကားတိုးစီးရတဲ့ဘဝကို မငျးမငျးစိတျကုနျလှပွိ..ရနျကုနျသားဖွဈပမေယျ့ ၄လှာက condo ခနျးလေးသာ ငှားနနေိုငျသညျ.. အိမျရောကျတော့ပငျပနျးမှုတှနေဲ့ အိပျယာပျေါပဈလှဲပွိး အတှေးနယျဆနျ့လိုကျသညျ.. မနကျဖွနျဆိုနယျပွနျသှားတဲ ဇနိးလေး မွတျနိုးပွနျရောကျမညျ.. အိမျထောငျကပြွိး ၃ နှဈ လောကျထိ လငျမယားနှဈယောကျစလုံးကလေး မယူဘဲ လှတျလှတျလပျလပျနကွေသညျ.. ပိုကျဆံလညျးပိုစုမိအောငျဖွဈသညျ.. .မွတျနိုးက ရှမျး ဗမာ ကပွားဖွဈသညျ.. အသားအရညျဖွူဖှေးပွိး ကိုယျလုံးထညျတောငျ့သညျ.. foreign trading company တဈခုမှာလုပျသောကွောငျ့ အလုပျခြိနျတှငျ ဘလောကျဈအကြီ င်ျအဖွူနှငျ့ စကပျတိုတိုကိုသာ ဝတျဆငျရသညျ..
ခလေးလညျးမယူသေး gym လညျးပုံမှနျကစားသော မွတျနိုးကိုယျလုံးကိုကွညျ့ပွိး ရုံးက ယောကြာင်္းလေးတှေ ပဈမှားနကွေတာ မငျးမငျးလညျးရိပျမိသညျ.. သို့သျော ကိစ်စမရှိ မွတျနိုးက ပိုကျဆံရှာဖို့ကလှဲပွိး ဘာမှစိတျမဝငျစားသောကွောငျ့ မငျးမငျး ကစိတျခပြွိးသား.. မွတျနိုးနဲ့လကျထပျပွိးကတညျးက နတေို့ငျးပုံမှနျလိုးဖွဈသညျ.. မငျးမငျးကိုသိပျခဈြတဲ့ မွတျနိုးက မငျးမငျး ခိုသျးသမြှ လိုးသမြှအကုနျခံသလို အပေးလညျးကောငျးသညျ.. တှေးရငျး မငျးမငျးစိတျတှကွှေလာသညျ.. မနကျပွနျ မွတျနိုးပွနျလာမှ အတိုးခလြိုးမညျ.. ရုံးကနတေောငျခှငျ့တဈရကျယူထားသညျ.. ဒီညအဖို့တော့ဘီယာသောကျပွိး အိပျလိုကျသညျ… ” ကလငျ ကလငျ” မိုးလငျးတော့ အခနျးရှမှေ့ လူချေါ bell က အသံမွညျလာသညျ.. မငျးမငျး အိပျခငျြမူးတူး နှငျ့ တံခါးဖှငျ့ပေးလိုကျတော့ မွတျနိုးဖွဈသညျ.. ”ကွာလိုကျတာကိုမငျးရယျ အဲ့လောကျထိအိပျရလားလို့..”
”အငျးပါ .. sorry..” မွတျနိုးအနောကျကဟကောငျမလေးတဈယောကျပါလာသညျ.. မွတျနိုးလိုပဲဖွူဖွူတောငျ့တောငျ့ခြောခြောလေး..ငယျတော့ငယျသေးသညျ.. ”ဘာကွောငျကွညျ့နတောလဲ..နနျးစုလေ မမှတျမိဘူးလား..နယျမှာဆယျတနျးဖွပွေိးတော့ ခုအားနတေုနျး computer သငျတနျးလေးလေးတကျရအောငျလို့ချေါလာတာ ကိုမငျးလညျး computer ရတယျဆိုတော့ အဆငျပွတောပေါ့..” မွတျနိုးပွောတော့မှ မှတျမိတော့သညျ.. ဟုတျသား နနျးစုလေး ကို လှနျခဲ့တဲ့ ၃ နှဈလောကျကမှတဈခါပဲတှဖေူ့းသညျ.. ”သွျော အေးအေး .. ကဲလာ အထဲဝငျကွတော့..” ပွနျရောကျရောကျခငျြးပဲ မွတျနိုးရမေိုးခြိုးပွိး ရုံး uniform လှဲနတောမွငျတော့..မငျးမငျးစိတျဓါတျကသြှားသညျ..”ဟာ မွတျနိုးကလညျး ခုမှပွနျရောကျတာကို မနားတော့ဘူးလား..”
”နားလို့မဖွဈဘူးကိူမငျးရဲ့ ခုပဲသူဌေးကဖုနျးဆကျတယျ ဒီနအေ့ရေးကွိး meeting ရျှတယျဆိုလို့..” မငျးမငျး စိတျလသှေားသညျ.. မထူးတဲ့အဆုံးတဈခြီလောကျတော့ဆှဲမညျ.. မွတျနိုးကိုဟလှမျးဖကျပွိး နမျးလိုကျသညျ.. ”ဟာ ကိုမငျးကှာ ရုံးသှားးမလို့ပါဆို”.. ”မွတျနိုးကလညျး ကို့ကို မသနားဘူးလားဟ” ဟုဆိုကာ အကြီ င်ျကွယျသိးကိုဆှဲဖွုတျလိုကျပွိးဟမွတျနိုးရဲ့ နို့ဖှေးဖှေးတှကေို စို့သညျ.. ”ပွှတျ ပွှတျ”.. အခြိနျလညျးမရတာမို့ စကပျလှနျ ဘောငျးဘီတိုခြှတျပွိး .. စောကျပတျဝလိးတကေ့ာ လိုးထညျ့လိုကျသညျ… ”ဗွှတျဗွှတျ အ အား” မလိုးတာကွာပွိမို့ မွတျနိုးစောကျပတျကကပျြပွိး လိုးလို့တအားကောငျးနသေညျ.. ”ဗွှတျ ဗွှတျ ကောငျးလိုကျတာမွတျနိုးရယျ,” နို့စို့ ရငျး အခကျြငါးဆယျလောကျဆကျတိုကျ စောငျ့လိုးပွိးဟသုတျရညျတှပှေနျးထညျ့လိုကျသညျ.. ပွိးသှားတော့ မွတျနိုးလညျး မငျးမငျးကို အနမျးခွှပွေိး အဝတျစားပွနျလှဲကာရုံးကိုသုတျသုတျ လဈတော့သညျ.. မငျးမငျးလညျးမောမော နှငျ့အိပျယာထဲနာရီဝကျလောကျမှိနျးနလေိုကျသညျ..
ပွိးမှဟပုဆိုးကောကျဝတျပွိး သုတျရညျပတေဲ့ လီးဆေးရနျ ရခြေိုးခနျးသှားသညျ.. ရခြေိုးခနျးတံခါးကလညျး မပိတျဘဲစထေ့ားတာကွောငျ့ မငျးမငျးတှနျးဖှငျ့လိုကျသညျ.. ”အမေ့ အောငျမလေး..” နနျးစု ထအျောသညျ.. မွငျကှငျးကွောငျ့ မငျးမငျးလညျးပွာသှားသညျ..ခယျမလေးက ရခြေိုးခနျးတံခါးမပိတျဘဲ ကိုယျတုံးလုံးရခြေိုးနသေညျ.. မငျးမငျးကိုမွငျတော့ လှနျ့ပွိး လကျနှဈဖကျက ပေါငျကွားလေးထဲအုပျထားလိုကျတော့ နို့ဖှေးဖှေး နှဈလုံးက အကွိးကွိး.. နို့သီးခေါငျးလေးကလညျးပနျးရောငျသနျးနသေညျ.. ခါးကသှယျပွိး ဗိုကျခေါကျမရှိသော အပျေါပိုငျးကိုယျလုံးဖွူဖွူကိုမွငျတော့ မငျးမငျးဟတံတှေးမွိုခလြိုကျသညျ.. နနျးစုလေးလညျး မိမိ အပျေါပိုငျးဗလာကငျြးကို မငျးမငျးကွောငျကွညျ့နတောတှတေ့ော့ ..နို့ဖှေးဖှေးနှဈလုံးကိုလကျနဲ့ပွနျကာလိုကျသညျ.. ပိုစိုးသှားသညျ.. ပေါငျဖွူဖွူသှယျသှယျကွားမှ အမှေးနုအုပျနသေော စောကျဖုတျကိုမွငျရတော့ ပုဆိုးအောကျမှလီးကပွနျထောငျလာသညျ.. ”ဘာကွညျ့နတောလဲကိုကွိးရ သှားတော့လေ” ”သွျော Sorry နျော..”
ခယျမလေး ရှကျရှကျဖွငျ့အျောလိုကျသောကွောငျ့ မငျးမငျးလညျး မှနျထူပွိးလှဲ့ထှကျသှားလိုကျသညျ.. စိတျထဲခယျမလေးကိုလညျး အားနာသှားသညျ.. မိမိကို အထငျသေးသှားမှာလညျးစိုးသညျ..ရခေဲသတ်ေတာထဲမှ beer တဈဘူးယူကာ အခနျးထဲဝငျသောကျပွိးပွနျအိပျနလေိုကျသညျ.. နလေ့ညျရောကျ ထမငျးစားခနျးသှားတော့ ပနျးကနျဆေးနတေဲ့ခယျမလေးကို အနောကျကတှသေ့ညျ.. မငျးမငျးအသံမပေးဘဲအနောကျကထိုငျကွညျ့နသေညျ.. အိမျနဝေတျ ဂါဝနျပါးအပနျးရောငျဝတျထားလို့ အလငျးရောငျကလညျးပွနျနတေော့ ခယျမလေးကိုယျလုံးက အထငျးသားမွငျရသညျ..
ဖငျကကွိးပွိးကောကျနသေညျ နို့ကလညျး မွတျနိုးအပြိုတုနျးကထကျကွိးပွိးလှသညျ.. ကွညျ့ကောငျးနတေုနျး နနျးစုလှညျ့လာသောကွောငျ့ အားနာသှားရပွနျသညျ.. နနျးစုက မသိဘဲစကားပွောသညျ..”ထမငျးစားတော့မှာလား ကိုကွိး ခူးပေးမယျလေ” ”အေးအေး”.. ထမငျးစားရငျးစိတျထဲက ခယျမလေးကို အားနာနတေုနျး.. ”သွျော.. ခယျမလေးနနျးစု.. မနကျကကိစ်စ sorry နျော.. ကိုကွိးလညျး ရုတျတရကျဆိုတေ့ာ့ကွောငျသှားလို့ပါ..” ”ရပါတယျကိုကွိးရ.. စုလေးလညျးပေါ့ဆသှားတာကို ထားလိုကျတော့ ဘာမှမဖွဈခဲ့သလို မလေို့ကျမယျလနေော့” သဘောထားကွိးလှနျးတဲ့ခယျမလေးအပွောကွောငျ့ မငျးမငျးပွုံးရငျး ထမငျးဆကျစားလိုကျသညျ.. ညနရေောကျတော့ မွတျနိုးပွနျရောကျလာသညျ.. ခနနား ရမေိုးခြိုးပွိး သုံးယောကျသားညနစောလကျဆုံစားတော့.. မွတျနိုးက ”ကိုမငျး ရေ လငျမယားခငျြးအားတော့နာပါတယျ..
မနကျဖွနျခှငျ့တဈရကျထပျယူပွိး စုလေးကိုသငျတနျးလိုကျအပျးပေးလိုကျပါလား..” ”အငျးလေ ရပါတယျ ကိုလညျးအလုပျပါးနတောဆိုတော့.. ” ထမငျးစားပွိးနာရီဝကျလောကျနတေော့ အခနျးထဲဝငျကွသညျ..မငျးမငျးက မွတျနိုးကို အနောကျကလမျးဖကျပွိး နို့ကို နယျဆော့လိုကျသညျ.. နောကျကနလေညျး လီးက ဖငျကွားကို ထဘီပါးပါးပျေါမှ ထောကျနသေေးသညျ.. လကျကအောကျကိုဆငျးပွိး ထဘီခြှတျချကြာ စောကျပတျကွားထဲ ပှတျပေးလိုကျသညျ.. ပွိးမ မွတျနိုးကို ကုတငျပျေါလှဲခိုငျးပွိး ပေါငျဖွဲကာ စောကျပတျကို လြှာနဲ့လြှကျပွိး စောကျစိကိုဆှဲစုပျလိုကျသညျ.. ”အား ကောငျးလိုကျတာ ဟငျ့” မွတျနိုးညညျးရငျး မငျးမငျးခေါငျးကို ပေါ့ငျကွားထဲအတငျးဆှဲကပျထားလိုကျသညျ.. ပွိးမှ မွတျနိုးပါးစပျဝလီးတပေ့ေး လိုကျတော့ မွတျနိုးကစုပျပေးသညျ.. အရှိနျရလာမှ စောကျပတျကို လိူးတော့သညျ.. အနကေုနျအိပျထားသောကွောငျ့ အားပွညျ့နသေော မငျးမငျးရဲ့လိုးခကျြတှကေကွမျးသညျ..
မွတျနိုးလညျးခါးကို ကော့ပေးထားသညျ.. ”ဗွှတျ ဗွှတျ အားအား..” နို့စို့ရငျးလိုးလိုကျ ခါးကိုငျရငျးလိူးလိုကျနဲ့ မငျးမငျး ဆကျတိုကျလိုးနသေညျ.. အလနျးတံကားက မပိတျထားသညျ့ အတှကျ အပွငျမှ နနျးစု ခြောငျးကွညျ့နတောကို မငျးမငျးရိပျမိသညျ.. ”မွတျနိုး ဖငျကုနျးကှာ..” ဖငျကုနျးပေးလိုကျတော့ မွတျနိုးစောကျပတျက ဖငျဖွူဖွူကွားမှ အာထှကျလာသညျ.. လီးထညျ့ကာ ခပျကွမျးကွမျးဖိလိုးလိုကျသညျ.. ”ပွှတျ ပွှတျ ဗွှတျဗွှတျ..” စောငျ့လိုးမှုကွောငျ့ မွတျနိုးရဲ့နို့က တှဲကပြွိး ခါရမျးနသေညျ.. မငျးမငျးလညျးပွိးခငျြလာတာကွောငျ့ မွတျနိုးဆံပငျကိုစောငျ့ဆှဲပွိး ဆကျတိုကျလိုးကာ.. သုတျရညျတှပေနျးထညျ့လိုကျသညျ… .. ခိုးကွညျ့နတေဲ့ခယျမလေး ရှမှေ့ာ.. မငျးမငျးတမှငျခပျကွမျးကွမျးလိုးခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ.. .. မနကျရောကျတော့ မွတျနိုးကရုံးသှားပွီ.. သငျတနျးလိုကျအပျပေးရနျ မငျးမငျးတဈယောကျခယျမလလေးနနျးစုကို ဧညျ့ခနျးကစောငျ့နတော တျောတျောကွာနပွေီ စိတျက မရှညျခငျြတော့.. ”ဟီး sorry နျောကိုကွိး စောငျ့တာကွာသှားလား” ရနျကုနျစရောကျဖူးပွိး အပွငျထှကျရတော့မညျ့ခယျမလေးပုံစံက ပြျောပွိးစိတျလှုပျရှားနသေညျ..
ဇဈနောကျဆှဲစကပျပနျးနုရောငျ ဒူးပွတျထိဝတျထားလို့ ခွသေလုံးဖွူဖွူက လှလှနျးသညျ.. ဖငျကကွိးလှနျးသောကွောငျ့ စကပျကကပျြနပွေီး ပေါငျလုံး နှငျ့ စောကျပတျရာတောငျပျေါနသေညျ..ခြိုငျးပွတျအမဲလေးပျေါမှ ဇာအကြီ င်ျပါးလေးကိုထပျဝတျထားလို့ ရှရေငျ အစုံက ဖွူဖှေးလှနျးလှသညျ.. ရှအေိုရောငျဆံသားအောကျက ဂုတျသားဖွူဖွူလေးက ကိုကျခငျြစရာ..ခယျမလေးတဈကိုယျလုံးကို အသေးစိတျကွညျ့ပွိးမှ ” ရပါတယျ လာလသှေားစို့” မငျးမငျးကို တကယျ့အဈကိုရငျးကွိးတဈယောကျလို အားကိုးရှာတဲ့နနျးစုက သငျတနျးတကျရမညျကိုသာ တှေးရငျးစိတျလှုပျရှားနသေညျ.. တက်ကစီ စီးတော့ အနောကျခနျးမှာတူတူထိုငျကွသညျ.. ခယျမလေးအလှ ကိုယျရနံ့တို့ကို အနှီးကပျခံစားလိုကျရတဲ့ မငျးမငျး တံတှေးတှမွေိုခလြိုကျသညျ.. ကားစီးရငျးလီးက တောငျလာသညျ.. စိတျထဲခယျမလေးကို လိုးခငျြစိတျတှပေိုမြားလာသညျ..
ဒါကွောငျ့ ခယျမလေးကို လိုးနိုငျရနျ တဈလမျးလုံးကွံစညျနခေဲ့သညျ.. သငျတနျးအပျပွိး ခယျမလေး practice လုပျဖို့ software ခှအေနညျးငယျနဲ့အတူ 18+ကားအခြို့ကိုပါ တမငျဝယျခဲ့သညျ.. ခယျမလေးကို အိမျမှာ ထိုကားမြားဖွငျ့ video editing ပွနျသငျပေးရမညျ.. အိမျပွနျရောကျတော့ မိမိတို့လငျမယားလိုးတာကို ခယျမလေးခြောငျးနကေနြရော၌ cctv camera တပျထားလိုကျသညျ.. တဈရကျနှဈရကျလောကျတော့ ခယျမလေးကို သငျတနျးကွိုပို့ဖွဈသညျ.. နောကျပိုငျးတှငျတော့ လိုကျမပို့ဖွဈဘဲ ခယျမလေးတဈယောကျတညျးသာ သှားလာနပွေီဖွဈသညျ.. တိုကျအောကျထပျက ကုလားမဲတဈကောငျကလညျး ခယျမလေးကို ပိုးနသေူဖွဈသညျ.. ခယျမလေး ကစိတျမဝငျစာသျောလညျးသငျတနျး အသှားအပွနျတိုငျးစကားလိုကျပွောနသေညျ..
ထိုမွငျကှငျးတှကွေောငျ့ မငျးမငျး တဈခကျြပွုံးပွိး သူတို့နှဈယောကျစကား အပွနျအလှနျပွောနပေုံမြားကို ဓါတျပုံ ဆယျပုံလောကျအမိအရိုကျထားလိုကျသညျ.. ဒီညတော့ မွတျနိုး စောစော အိပျသညျ.. ဧညျ့ခနျးထဲ computer ကငျြ့နတေဲ့ ခယျမလေးဆီကို မငျးမငျး beer ဘူးကိုငျပွိး ဘေးမှာဝငျထိုငျလိုကျသညျ.. ”ခယျမလေး နနျးစု.. ကိုကွိးခွတေောကျတှညေောငျးလှနျးလို့ နှိပျပေးပါဦး.. ” ”ဟုတျ ကိုကွိး..” အဈကို အရငျးသဖှယျ ဆရာသဖှယျသဘောထားသော မငျးမငျးကို နနျးစုက ကွောကျသညျ.. ရိုသသေညျ..ခွသေလုံးက စနှိပျနသေော ခယျမလေးအလှကိုကွညျ့ပွိး မငျးမငျးစိတျတှထေနျလာသညျ.. ကုနျးနှိပျနတေော့ ညဝတျဂါဝနျ လညျက ဟနပွေိး နို့ဖွူဖွူကိုဘျောလီပနျးရောငျနဲ့အတူတှရေ့သညျ..
ပေါငျရငျးလောကျထိရောကျတော့ ဘောငျးဘီတိုမဝတျထားတဲ့ ပုဆိုးကွား လီးကထောငျနပွေိ.. နနျးစု သတိထားမိသျောလညျး ဘာမှမပွောသေးဘဲ ဆကျနှိပျနလေိုကျသညျ.. မငျးမငျးစိတျတှထေိနျးမရတော့ဘဲ ဂါ။နျအောကျက နနျးစုပေါငျတနျကို လှမျးပှတျလိုကျသညျ.. နနျးစုလညျးလှနျ့သှားပွိး မငျးမငျးလကျကို ခါခကြာ အိပျခနျးထဲပွနျပွေးဝငျသှားလိုကျသညျ.. မငျးမငျးစိတျထဲမတငျမကဖြွဈ အံကွိတျပွိး.. အိပျပြျောနသေော ဇနိးလေး မွတျနိုးကိုသာ စိတျကွိုကျလိုးလိုကျသညျ..
မနကျရောကျတော့ ထမငျးစားနတေုနျးမွတျနိုးက ”သွျော ကိုမငျးရေ သနျဘကျခါကရြငျ company က အရေးကွိးကိစ်စနဲ့ မွတျနိုး စလုံးကိုသှားရမယျ.. နှဈပါတျလောကျတော့ကွာမှာ.. အဲ့တာ နျးစုလေးကို ဂရုစိုကျဥိးနျော.. အောကျထပျက ကုလားက နနျးစုနောကျလိုကျနတော မွတျနိုးလညျးမကွိုကျဘူး..” မငျးမငျးကနြေပျစှာပွုံးလိုကျပွိး ”စိတျခပြါ မိနျးမရာ..” မငျးမငျး အပွုံးကမရပျတော့ ..ခယျမလေးက ဘာမှမပွောဘဲထမငျးသာဆကျစားနသေညျ.. မွတျနိုးကို လဆေိပျလိုကျမပို့ခငျ ကတညျးကဟမငျးမငျး ကာမအားတိုးဆေးကွိုသောကျထားပွိးသား..
အိမျပွနျရောကျတော့ ဧညျ့ခနျးဆိုဖာပျေါနားနလေိုကျသညျ.. သငျတနျးသှားရနျခယျမလေးထှကျလာသညျ.. ခြိတျထဘီနဲ့ ရှပျအကြီ င်ျပါးကိုဝတျဆငျထားတဲ့ နနျးစုကိုယျလုံးက မငျးမငျးကိုစိတျပိုကွှစသေညျ.. ”နနျးစု ခနနဥေိး. မငျးကိုပွစေရာရှိတယျ..” လသေံမာနတေဲ့ မငျးမငျးစကားကွောငျ့ နနျးစုလညျးခွလှေမျးတနျ့သှားသညျ..”ဟုတျ ပွောပါကိုကွိး..” လကျထဲကိုငျထားသော ဓါတျပုံအခြို့ကို ခယျမလေးအားပွလိုကျသညျ..ဓါတျပုံတှတေ့ော့ နနျးစုလှနျ့သှားသညျ.. အောကျထပျက ကုလားနဲ့ နနျးစု နှဈယောကျတညျးပုံဖွဈသညျ.. ရိုးရိုးပုံမဟုတျ.. လငျမယားသာသာ ခဈြရညျလူးနပေုံမြားဖွဈသညျ..မငျးမငျးကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျသော photoshop မြားပငျဖွဈသညျ.. ”ဟာ ဒါဘာတှလေဲ မဟုတျဘူးနျောကိုကွိး..” ”ဘာမဟုတျရမှာလညျး အဲ့လောကျထိ လကျပူးလကျကပျြမိနတောတောငျ..” ဟုတျလညျးဟုတျသညျ ဓါတျပုံတှကေ တကယျ့ အစဈအတိုငျးပငျ.. ‘မဟုတျပါဘူး ကိုကွိးရယျ ဒါသကျသကျလုပျကွံထားတာပါ..” နနျးစု ငိုလပွေိ..” ဘာကို လုပျကွံရမှာလဲ..
ဒီဓါတျပုံတှကေို နယျက မငျးမိဘဆီပို့လိုကျရမလားပွော..” ”ဟငျ့ မလုပျပါနဲ့ကိုကွိးရယျ..” နနျးစုတောငျးပနျရှာသညျ.. မငျးမငျးလညျးမလြှော့ဘဲ.. ”မငျးကှာ.. မိဘနဲ့ အဈမက မငျးကိုကောငျးစခေငျြလို့ ရနျကုနျမှာ သငျတနျးတကျခိုငျးတာ..ငါ့မှာလညျးစာတှပွေပေးလိုကျရတာ.. ခုတော့ မငျးက ကုလားလိုးတာခံနတေယျ .. စောကျပတျတျောတျောယားနလေား.. ကုလားမယားဖွဈခငျြနတောဟုတျလား..” ခကျထနျလှနျးတော့ မငျးမငျးလသေံကွောငျ့ နနျးစု ဘာပွနျပွောရမှနျးမသိတော့.. ကလေးတဈရောကျလိုသာ ငိုပွိး ဘူးသာခံငွငျးနရှောသညျ..မငျးမငျးကပဲဆကျပွိး computer ဖှငျ့ကာ မိမိတို့လိုးနကေို နနျးစုခြောငျးကွညျ့တဲ့ video file တှဆေကျပွလိုကျသညျ.. နနျးစု ဘာမှမပွောနိုငျတော့.. ”ခုမှ ငိုဘဲငိုမနနေဲ့.. ငါတို့လိုးတာတှခြေောငျးကွညျ့ပွိး ကုလားလိုးတာသှားခံတယျ.. ကုလားလီးတျောတျောကွိုကျနလေား..မေးနတောဖွလေေ.. ” ”ဟငျ့ မဟုတျပါဘူးကိုကွိးရယျ..” နနျးစုငိုပဲ ငိူနတေော့သညျ..
”မငျးအဈမ သိသှားရငျဘယျလိုနမေလဲ.. ဓါတျပုံတှေ မငျးမိဘဆီပို့လိုကျရငျ မငျးကိုကုလားနဲ့ပေးစားမယျဆိုတာသိလား..” မိဘတှဆေီရောကျလို့မဖွဈနနျးစု သလေိမျ့မညျ.. ”မပို့နဲ့ ကိုကွိးရယျ တောငျးပနျပါတယျ..” မငျးမငျးကနြေပျသှားသညျ.. ” အေး ငါမေးတာဖွေ မငျးကုလားမယားလုပျပွိး ကုလားလိုးတာခံမလား .. ငါခိုငျးတာလုပျမလား..” ”ဟငျ့.. ကိုကွိးခိုငျးတာလုပျပါ့မယျ..” ”အေး လာခဲ့ ငါ့နားကို..” စားပှဲပျေါလှယျအိပျတငျပွိး မငျးမငျးဆီလာခဲ့သညျ.. ခြိတျထဘီ ကှဲဝတျထားတော့ လမျးလြှောကျတိုငျး ပေါငျရငျးသားထိတှရေသညျ..ရှပျအကြီ င်ျကပါးလို့ ဗိုကျအသားဖွူဖွူလေးက လြှကျခငျြစရာ.. မငျးမငျးက ဆကျပွိး ” မငျးစောကျပတျတျောတျောယားနလေား..” ကွမျးတနျးလှနျးတဲ့မေးခှနျးကွောကျ့ နနျးစုငိုနပွေနျသညျ.. ”မေးနတောဖွလေေ.” ”မယားပါဘူးကိုကွိးရယျ”..” ငါ့နားတိုးလာခဲ့” နနျးစု ကွောကျကွောကျနှငျ့တိုးလာသညျ..
မငျးမငျးလညျး နနျးစုကိုယျလုံးကိုစိုကျကွညျ့ လီးကပိုတောငျလာသညျ.. ထဘီပျေါကနပွေိး တငျးနတေဲ့ ဖငျကို ပှတျလိုကျ ညဈလိုကျလုပျသညျ..နနျးစု အလိုမတူသျောလညျး ကွောကျလို့သာညိမျခံနရေသညျ.. လကျက ထဘီအောကျလြှိုဝငျပွိး ပေါငျးသားတှကေိုပှတျသညျ.. အတှငျးခံပါးပျေါကနပွေိး ဖငျကိုနှိုကျပွနျသညျ..ပွိးမှ.. ” အကြီ ခငြ်္ှတျလိုကျ”.. နနျးစုလေးလနျ့သှားသညျ.. ”မလုပျပါနဲ့ကိုကွိး ရယျ ..” မငျးမငျးစိတျမရှညျတော့ ” မငျးကုလားကိုကြ တော့ စောကျပတျပွဲအောငျလိုးခံပွိးတော့.. ငါနောကျဆုံပဲမေးမယျ.. မငျးသဘောပဲ.. ကုလားမယားဖွဈခငျြလား ငါလိုးတာခံမလား ဖွေ”.. နနျးစုလညျး မတတျနိုငျတဲ့အဆုံး အကြီ င်ျကွယျသိးဖွုတျကာ ခြှတျလိုကျတော့..ဘျောလီထဲမှ နို့က လြှံထှကျနသေညျ.. ” ထဘီပါခြှတျစမျး” စိတျမရှညျဘဲ ကိုယျတိုငျဆှဲခြှတျလိုကျတော့ ဘျောလီနဲ့ ပငျတီ အပနျးရောငျဝမျးဆကျနှငျ့ ခယျမလေးကိူယျလုံးက ထလိုးခငျြစရာ..မငျးမငျး မတျတပါထပွိး ခယျမလေးကိုသိုငျးဖကျကာ နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို စုပျနမျးလိုကျသညျ…
လကျကလညျး ဖငျကိုပှတျလိုကျ စောကျပတျကိုထိုးကလိလိုကျလုပျသညျ.. ဘျောလီခြိတျကိုဖွုတျလိုကျတော့..နို့ဖွူဖွူကွိးနဲ့ နို့သီးခေါငျးပနျးရောငျလေးကို လြှာနဲ့ကလိပွိး စို့သညျ..”အ အ” ခယျမလေးခါးတှကေော့တကျလာသညျ.. ပွိးမှပငျတီကိုခြှတျလိုကျတော့ စောကျမှေးနုတှကွေားက အပြိုစငျစောကျစိလေးက လိုးခငျြစရာ.. မငျးမငျးဒူးထောကျလိုကျပွိး ခယျမလေးပေါငျကွားကနေ စောကျပတျကိုလြှကျနလေိုကျသညျ..” မလုပျပါနဲ့ကိုကွိးရယျ..” မငျးမငျးဘာမှပွနျမပွောဘဲ. ဆကျလြှကျနလေိုကျသညျ..စောကျစိကွားမှ အရညျတှစေီးကလြာသညျ.. ”အား အငျး ဟငျး..” ခယျမလေးညညျးသံကွောငျ့ မငျးမငျးကနြေပျသှားပွိး မတျတပျပွနျထကာ ပုဆိုးခြှတျလိုကျသညျ.. ဆေးရှိနျကွောငျ့ လီးက ပုံမှနျထကျပိုကွိးပွိး မာနသေညျ..ခယျမလေးလကျကိုယူကာ လီးပျေါတငျထားလိုကျသညျ.. နနျးစုလညျး ကိုငျပွိး ဂှငျးတိုကျသလို လုပျပေးကာ မငျးမငျး စုပျနမျးတာခံလိုကျ.. နို့စို့တာခံလိုကျနဲ့ ပွုသမြှနုနရေသညျ..
” မငျး ထိုငျခလြိုကျ.” နနျးစုကိုထိုငျခိုငျးပွိး ပါးစပျနားလီးတပေ့ေးလိုကျသညျ..မမအလိုးခံတာ မွငျဖူးနသေောကွောငျ့ လီးစုပျခိုငျးမှနျးသိသညျ.. လီးတံကိုငုံကာ စုပျပေးလိုကျသညျ.. မငျးမငျးလညျးကောငျးလှနျးသောကွောငျ့ ပါးစပျကို ဆကျတိုကျလိုးနလေိုကျသညျ..ပွိးမှ နနျးစုကိုဆိုဖာပျေါအိပျခိုငျးလိုကျသညျ.. စောကျရညျရှဲနတေဲ့ စောကျပတျဝကို လိးကွိးတပွေိ့း ထိုးထညျ့လိုကျသညျ..”ဗွဈ ဗွဈ.. အား နာတယျ ကိုကွိးရ..” သှေးတှထှေကျလာသညျ..မငျးမငျး ဘာမပွောဘဲ ဆကျတိုကျနာနာလေးလိုးလိုကျသညျ.. အဈမလညျးလိုး ခယျမဖွူဖွူခြောခြောလေးကိုလညျး ပါကငျဖေါကျပွိးတကျလိုးရသောကွောငျ့ စိတျကွိုကျဖွဈနသေညျ.. နို့လုံးလုံးလေးကို ကုနျးစို့ပွိး အခကျြ လေးငါးဆယျလောကျစောငျ့လိုးကာ သုတျရညျတှပေနျးထညျ့လိုကျသညျ..
တဈခြီပွိးသှားသျောလညျး လိးကမသသေေး.. ခယျမမကျြနှာပျေါပွောငျးပွနျတကျခှပွိး 69 shape နဲ့ လီးစုပျခိုငျးပွနျသညျ.. စောကျစိထဲလြှာနှငျ့ဆှဲစုပျလိုကျသညျ.. ခယျမလေးပါးစပျကိုလညျး လိုးရငျး လရညျတှေ ပနျးထညျ့လိုကျသညျ..ပကျလကျအနထေားဖွဈနတေဲ့ခယျမလေး က လရညျအကုနျမွိုခလြိုကျရသညျ.. မငျးမငျးက မပွိးသေး.. အခနျးထဲသှားပွိး ဖငျလိုးတဲ့ gel ဘူးယူလာသညျ.. ခယျမလေးကိုဖငျကုနျးခိုငျးသညျ.. ဖငျဖွူကွိးကိုမွငိတော့ မငျးမငျး လီးက ပိုတောငျလာသညျ..ဖငျတုံးကိုလကျဖွငျ့ရိုကျခလြိုကျသညျ.,”ဖွနျး ဖွနျး” ဖငျခါသှားသညျ..ဖငျကုနျးနတေဲ့ခယျမလေူး ပေါငျကွားထဲဝငျပွိး စောကျပတျကိုထပျလြှကျသညျ.. ပွိးမှ တောငျလြှောကျ စအိုဝကိုပါ လြှာနဲ့လြှကျပွိးထိုးကလိလိုကျသညျ..
”အား ကိုကွိးရယျ ဟငျ့”.. စအိုဝဆီလူးပွိး လီးထိုးထညျ့လိုကျသညျ.. ”ဗွဈ ဗွဈ..အား နာလိုကျတာကိုကွိးရ” မငျးမငျး ဆကျတိုကျစောငျ့လိုးနသေညျ.. စောကျပတျကောငျးသလောကျ ဖငျလညျးလိုးလို့ကောငျးသော ခယျမလေးပငျ.. ဖငျကွိးကို ဖွဲပွိး ဆကျတိုကျစောငျ့လိုးကာ.. တဈခြီထပျပွိးသှားပွနျသညျ…အားကုနျသှားတော့ နို့ကိုငျပွိး ခယျမလေးကိုသာ အနမျးခွှေီနလိုကျသညျ.. မွတျနိုးပွနျမလာခငျအထိတော့ ခယျမလေးက မွတျနိုးအစား နတေို့ငျးအလိုးခံရသညျ.. မွတျနိုးပွနျလာပွိးနောကျပိုငျးလညျး ခယျမလေးနဲ့ ခိုးခိုးပွိးလိုးဖွဈကွသေးသညျ။
မြို့ပြရဲ့မွန်းကျပ်မှုနဲ့အတူ ရုံးကအပြန် ဘတ်စ်ကားတိုးစီးရတဲ့ဘဝကို မင်းမင်းစိတ်ကုန်လှပြိ..ရန်ကုန်သားဖြစ်ပေမယ့် ၄လွှာက condo ခန်းလေးသာ ငှားနေနိုင်သည်.. အိမ်ရောက်တော့ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ အိပ်ယာပေါ်ပစ်လှဲပြိး အတွေးနယ်ဆန့်လိုက်သည်.. မနက်ဖြန်ဆိုနယ်ပြန်သွားတဲ ဇနိးလေး မြတ်နိုးပြန်ရောက်မည်.. အိမ်ထောင်ကျပြိး ၃ နှစ် လောက်ထိ လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကလေး မယူဘဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကြသည်.. ပိုက်ဆံလည်းပိုစုမိအောင်ဖြစ်သည်.. .မြတ်နိုးက ရှမ်း ဗမာ ကပြားဖြစ်သည်.. အသားအရည်ဖြူဖွေးပြိး ကိုယ်လုံးထည်တောင့်သည်.. foreign trading company တစ်ခုမှာလုပ်သောကြောင့် အလုပ်ချိန်တွင် ဘလောက်စ်အကျီ င်္အဖြူနှင့် စကပ်တိုတိုကိုသာ ဝတ်ဆင်ရသည်..
ခလေးလည်းမယူသေး gym လည်းပုံမှန်ကစားသော မြတ်နိုးကိုယ်လုံးကိုကြည့်ပြိး ရုံးက ယောကျာင်္းလေးတွေ ပစ်မှားနေကြတာ မင်းမင်းလည်းရိပ်မိသည်.. သို့သော် ကိစ္စမရှိ မြတ်နိုးက ပိုက်ဆံရှာဖို့ကလွဲပြိး ဘာမှစိတ်မဝင်စားသောကြောင့် မင်းမင်း ကစိတ်ချပြိးသား.. မြတ်နိုးနဲ့လက်ထပ်ပြိးကတည်းက နေ့တိုင်းပုံမှန်လိုးဖြစ်သည်.. မင်းမင်းကိုသိပ်ချစ်တဲ့ မြတ်နိုးက မင်းမင်း ခိုသ်းသမျှ လိုးသမျှအကုန်ခံသလို အပေးလည်းကောင်းသည်.. တွေးရင်း မင်းမင်းစိတ်တွေကြွလာသည်.. မနက်ပြန် မြတ်နိုးပြန်လာမှ အတိုးချလိုးမည်.. ရုံးကနေတောင်ခွင့်တစ်ရက်ယူထားသည်.. ဒီညအဖို့တော့ဘီယာသောက်ပြိး အိပ်လိုက်သည်… ” ကလင် ကလင်” မိုးလင်းတော့ အခန်းရှေ့မှ လူခေါ် bell က အသံမြည်လာသည်.. မင်းမင်း အိပ်ချင်မူးတူး နှင့် တံခါးဖွင့်ပေးလိုက်တော့ မြတ်နိုးဖြစ်သည်.. ”ကြာလိုက်တာကိုမင်းရယ် အဲ့လောက်ထိအိပ်ရလားလို့..”
”အင်းပါ .. sorry..” မြတ်နိုးအနောက်ကဟကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါလာသည်.. မြတ်နိုးလိုပဲဖြူဖြူတောင့်တောင့်ချောချောလေး..ငယ်တော့ငယ်သေးသည်.. ”ဘာကြောင်ကြည့်နေတာလဲ..နန်းစုလေ မမှတ်မိဘူးလား..နယ်မှာဆယ်တန်းဖြေပြိးတော့ ခုအားနေတုန်း computer သင်တန်းလေးလေးတက်ရအောင်လို့ခေါ်လာတာ ကိုမင်းလည်း computer ရတယ်ဆိုတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့..” မြတ်နိုးပြောတော့မှ မှတ်မိတော့သည်.. ဟုတ်သား နန်းစုလေး ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်ကမှတစ်ခါပဲတွေ့ဖူးသည်.. ”သြော် အေးအေး .. ကဲလာ အထဲဝင်ကြတော့..” ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ မြတ်နိုးရေမိုးချိုးပြိး ရုံး uniform လှဲနေတာမြင်တော့..မင်းမင်းစိတ်ဓါတ်ကျသွားသည်..”ဟာ မြတ်နိုးကလည်း ခုမှပြန်ရောက်တာကို မနားတော့ဘူးလား..”
”နားလို့မဖြစ်ဘူးကိူမင်းရဲ့ ခုပဲသူဌေးကဖုန်းဆက်တယ် ဒီနေ့အရေးကြိး meeting ရ်ှတယ်ဆိုလို့..” မင်းမင်း စိတ်လေသွားသည်.. မထူးတဲ့အဆုံးတစ်ချီလောက်တော့ဆွဲမည်.. မြတ်နိုးကိုဟလှမ်းဖက်ပြိး နမ်းလိုက်သည်.. ”ဟာ ကိုမင်းကွာ ရုံးသွားးမလို့ပါဆို”.. ”မြတ်နိုးကလည်း ကို့ကို မသနားဘူးလားဟ” ဟုဆိုကာ အကျီ င်္ကြယ်သိးကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ပြိးဟမြတ်နိုးရဲ့ နို့ဖွေးဖွေးတွေကို စို့သည်.. ”ပြွတ် ပြွတ်”.. အချိန်လည်းမရတာမို့ စကပ်လှန် ဘောင်းဘီတိုချွတ်ပြိး .. စောက်ပတ်ဝလိးတေ့ကာ လိုးထည့်လိုက်သည်… ”ဗြွတ်ဗြွတ် အ အား” မလိုးတာကြာပြိမို့ မြတ်နိုးစောက်ပတ်ကကျပ်ပြိး လိုးလို့တအားကောင်းနေသည်.. ”ဗြွတ် ဗြွတ် ကောင်းလိုက်တာမြတ်နိုးရယ်,” နို့စို့ ရင်း အချက်ငါးဆယ်လောက်ဆက်တိုက် စောင့်လိုးပြိးဟသုတ်ရည်တွေပှန်းထည့်လိုက်သည်.. ပြိးသွားတော့ မြတ်နိုးလည်း မင်းမင်းကို အနမ်းခြွေပြိး အဝတ်စားပြန်လှဲကာရုံးကိုသုတ်သုတ် လစ်တော့သည်.. မင်းမင်းလည်းမောမော နှင့်အိပ်ယာထဲနာရီဝက်လောက်မှိန်းနေလိုက်သည်..
ပြိးမှဟပုဆိုးကောက်ဝတ်ပြိး သုတ်ရည်ပေတဲ့ လီးဆေးရန် ရေချိုးခန်းသွားသည်.. ရေချိုးခန်းတံခါးကလည်း မပိတ်ဘဲစေ့ထားတာကြောင့် မင်းမင်းတွန်းဖွင့်လိုက်သည်.. ”အမေ့ အောင်မလေး..” နန်းစု ထအော်သည်.. မြင်ကွင်းကြောင့် မင်းမင်းလည်းပြာသွားသည်..ခယ်မလေးက ရေချိုးခန်းတံခါးမပိတ်ဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးရေချိုးနေသည်.. မင်းမင်းကိုမြင်တော့ လှန့်ပြိး လက်နှစ်ဖက်က ပေါင်ကြားလေးထဲအုပ်ထားလိုက်တော့ နို့ဖွေးဖွေး နှစ်လုံးက အကြိးကြိး.. နို့သီးခေါင်းလေးကလည်းပန်းရောင်သန်းနေသည်.. ခါးကသွယ်ပြိး ဗိုက်ခေါက်မရှိသော အပေါ်ပိုင်းကိုယ်လုံးဖြူဖြူကိုမြင်တော့ မင်းမင်းဟတံတွေးမြိုချလိုက်သည်.. နန်းစုလေးလည်း မိမိ အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်းကို မင်းမင်းကြောင်ကြည့်နေတာတွေ့တော့ ..နို့ဖွေးဖွေးနှစ်လုံးကိုလက်နဲ့ပြန်ကာလိုက်သည်.. ပိုစိုးသွားသည်.. ပေါင်ဖြူဖြူသွယ်သွယ်ကြားမှ အမွှေးနုအုပ်နေသော စောက်ဖုတ်ကိုမြင်ရတော့ ပုဆိုးအောက်မှလီးကပြန်ထောင်လာသည်.. ”ဘာကြည့်နေတာလဲကိုကြိးရ သွားတော့လေ” ”သြော် Sorry နော်..”
ခယ်မလေး ရှက်ရှက်ဖြင့်အော်လိုက်သောကြောင့် မင်းမင်းလည်း မွန်ထူပြိးလှဲ့ထွက်သွားလိုက်သည်.. စိတ်ထဲခယ်မလေးကိုလည်း အားနာသွားသည်.. မိမိကို အထင်သေးသွားမှာလည်းစိုးသည်..ရေခဲသေတ္တာထဲမှ beer တစ်ဘူးယူကာ အခန်းထဲဝင်သောက်ပြိးပြန်အိပ်နေလိုက်သည်.. နေ့လည်ရောက် ထမင်းစားခန်းသွားတော့ ပန်းကန်ဆေးနေတဲ့ခယ်မလေးကို အနောက်ကတွေ့သည်.. မင်းမင်းအသံမပေးဘဲအနောက်ကထိုင်ကြည့်နေသည်.. အိမ်နေဝတ် ဂါဝန်ပါးအပန်းရောင်ဝတ်ထားလို့ အလင်းရောင်ကလည်းပြန်နေတော့ ခယ်မလေးကိုယ်လုံးက အထင်းသားမြင်ရသည်..
ဖင်ကကြိးပြိးကောက်နေသည် နို့ကလည်း မြတ်နိုးအပျိုတုန်းကထက်ကြိးပြိးလှသည်.. ကြည့်ကောင်းနေတုန်း နန်းစုလှည့်လာသောကြောင့် အားနာသွားရပြန်သည်.. နန်းစုက မသိဘဲစကားပြောသည်..”ထမင်းစားတော့မှာလား ကိုကြိး ခူးပေးမယ်လေ” ”အေးအေး”.. ထမင်းစားရင်းစိတ်ထဲက ခယ်မလေးကို အားနာနေတုန်း.. ”သြော်.. ခယ်မလေးနန်းစု.. မနက်ကကိစ္စ sorry နော်.. ကိုကြိးလည်း ရုတ်တရက်ဆိုတေ့ာ့ကြောင်သွားလို့ပါ..” ”ရပါတယ်ကိုကြိးရ.. စုလေးလည်းပေါ့ဆသွားတာကို ထားလိုက်တော့ ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလို မေ့လိုက်မယ်လေနော့” သဘောထားကြိးလွန်းတဲ့ခယ်မလေးအပြောကြောင့် မင်းမင်းပြုံးရင်း ထမင်းဆက်စားလိုက်သည်.. ညနေရောက်တော့ မြတ်နိုးပြန်ရောက်လာသည်.. ခနနား ရေမိုးချိုးပြိး သုံးယောက်သားညနေစာလက်ဆုံစားတော့.. မြတ်နိုးက ”ကိုမင်း ရေ လင်မယားချင်းအားတော့နာပါတယ်..
မနက်ဖြန်ခွင့်တစ်ရက်ထပ်ယူပြိး စုလေးကိုသင်တန်းလိုက်အပ်းပေးလိုက်ပါလား..” ”အင်းလေ ရပါတယ် ကိုလည်းအလုပ်ပါးနေတာဆိုတော့.. ” ထမင်းစားပြိးနာရီဝက်လောက်နေတော့ အခန်းထဲဝင်ကြသည်..မင်းမင်းက မြတ်နိုးကို အနောက်ကလမ်းဖက်ပြိး နို့ကို နယ်ဆော့လိုက်သည်.. နောက်ကနေလည်း လီးက ဖင်ကြားကို ထဘီပါးပါးပေါ်မှ ထောက်နေသေးသည်.. လက်ကအောက်ကိုဆင်းပြိး ထဘီချွတ်ခ်ျကာ စောက်ပတ်ကြားထဲ ပွတ်ပေးလိုက်သည်.. ပြိးမ မြတ်နိုးကို ကုတင်ပေါ်လှဲခိုင်းပြိး ပေါင်ဖြဲကာ စောက်ပတ်ကို လျှာနဲ့လျှက်ပြိး စောက်စိကိုဆွဲစုပ်လိုက်သည်.. ”အား ကောင်းလိုက်တာ ဟင့်” မြတ်နိုးညည်းရင်း မင်းမင်းခေါင်းကို ပေါ့င်ကြားထဲအတင်းဆွဲကပ်ထားလိုက်သည်.. ပြိးမှ မြတ်နိုးပါးစပ်ဝလီးတေ့ပေး လိုက်တော့ မြတ်နိုးကစုပ်ပေးသည်.. အရှိန်ရလာမှ စောက်ပတ်ကို လိူးတော့သည်.. အနေကုန်အိပ်ထားသောကြောင့် အားပြည့်နေသော မင်းမင်းရဲ့လိုးချက်တွေကကြမ်းသည်..
မြတ်နိုးလည်းခါးကို ကော့ပေးထားသည်.. ”ဗြွတ် ဗြွတ် အားအား..” နို့စို့ရင်းလိုးလိုက် ခါးကိုင်ရင်းလိူးလိုက်နဲ့ မင်းမင်း ဆက်တိုက်လိုးနေသည်.. အလန်းတံကားက မပိတ်ထားသည့် အတွက် အပြင်မှ နန်းစု ချောင်းကြည့်နေတာကို မင်းမင်းရိပ်မိသည်.. ”မြတ်နိုး ဖင်ကုန်းကွာ..” ဖင်ကုန်းပေးလိုက်တော့ မြတ်နိုးစောက်ပတ်က ဖင်ဖြူဖြူကြားမှ အာထွက်လာသည်.. လီးထည့်ကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖိလိုးလိုက်သည်.. ”ပြွတ် ပြွတ် ဗြွတ်ဗြွတ်..” စောင့်လိုးမှုကြောင့် မြတ်နိုးရဲ့နို့က တွဲကျပြိး ခါရမ်းနေသည်.. မင်းမင်းလည်းပြိးချင်လာတာကြောင့် မြတ်နိုးဆံပင်ကိုစောင့်ဆွဲပြိး ဆက်တိုက်လိုးကာ.. သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်သည်… .. ခိုးကြည့်နေတဲ့ခယ်မလေး ရှေ့မှာ.. မင်းမင်းတမှင်ခပ်ကြမ်းကြမ်းလိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်.. .. မနက်ရောက်တော့ မြတ်နိုးကရုံးသွားပြီ.. သင်တန်းလိုက်အပ်ပေးရန် မင်းမင်းတစ်ယောက်ခယ်မလေလးနန်းစုကို ဧည့်ခန်းကစောင့်နေတာ တော်တော်ကြာနေပြီ စိတ်က မရှည်ချင်တော့.. ”ဟီး sorry နော်ကိုကြိး စောင့်တာကြာသွားလား” ရန်ကုန်စရောက်ဖူးပြိး အပြင်ထွက်ရတော့မည့်ခယ်မလေးပုံစံက ပျော်ပြိးစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်..
ဇစ်နောက်ဆွဲစကပ်ပန်းနုရောင် ဒူးပြတ်ထိဝတ်ထားလို့ ခြေသလုံးဖြူဖြူက လှလွန်းသည်.. ဖင်ကကြိးလွန်းသောကြောင့် စကပ်ကကျပ်နေပြီး ပေါင်လုံး နှင့် စောက်ပတ်ရာတောင်ပေါ်နေသည်..ချိုင်းပြတ်အမဲလေးပေါ်မှ ဇာအကျီ င်္ပါးလေးကိုထပ်ဝတ်ထားလို့ ရွှေရင် အစုံက ဖြူဖွေးလွန်းလှသည်.. ရွှေအိုရောင်ဆံသားအောက်က ဂုတ်သားဖြူဖြူလေးက ကိုက်ချင်စရာ..ခယ်မလေးတစ်ကိုယ်လုံးကို အသေးစိတ်ကြည့်ပြိးမှ ” ရပါတယ် လာလေသွားစို့” မင်းမင်းကို တကယ့်အစ်ကိုရင်းကြိးတစ်ယောက်လို အားကိုးရှာတဲ့နန်းစုက သင်တန်းတက်ရမည်ကိုသာ တွေးရင်းစိတ်လှုပ်ရှားနေသည်.. တက္ကစီ စီးတော့ အနောက်ခန်းမှာတူတူထိုင်ကြသည်.. ခယ်မလေးအလှ ကိုယ်ရနံ့တို့ကို အနှီးကပ်ခံစားလိုက်ရတဲ့ မင်းမင်း တံတွေးတွေမြိုချလိုက်သည်.. ကားစီးရင်းလီးက တောင်လာသည်.. စိတ်ထဲခယ်မလေးကို လိုးချင်စိတ်တွေပိုများလာသည်..
ဒါကြောင့် ခယ်မလေးကို လိုးနိုင်ရန် တစ်လမ်းလုံးကြံစည်နေခဲ့သည်.. သင်တန်းအပ်ပြိး ခယ်မလေး practice လုပ်ဖို့ software ခွေအနည်းငယ်နဲ့အတူ 18+ကားအချို့ကိုပါ တမင်ဝယ်ခဲ့သည်.. ခယ်မလေးကို အိမ်မှာ ထိုကားများဖြင့် video editing ပြန်သင်ပေးရမည်.. အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မိမိတို့လင်မယားလိုးတာကို ခယ်မလေးချောင်းနေကျနေရာ၌ cctv camera တပ်ထားလိုက်သည်.. တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်တော့ ခယ်မလေးကို သင်တန်းကြိုပို့ဖြစ်သည်.. နောက်ပိုင်းတွင်တော့ လိုက်မပို့ဖြစ်ဘဲ ခယ်မလေးတစ်ယောက်တည်းသာ သွားလာနေပြီဖြစ်သည်.. တိုက်အောက်ထပ်က ကုလားမဲတစ်ကောင်ကလည်း ခယ်မလေးကို ပိုးနေသူဖြစ်သည်.. ခယ်မလေး ကစိတ်မဝင်စာသော်လည်းသင်တန်း အသွားအပြန်တိုင်းစကားလိုက်ပြောနေသည်..
ထိုမြင်ကွင်းတွေကြောင့် မင်းမင်း တစ်ချက်ပြုံးပြိး သူတို့နှစ်ယောက်စကား အပြန်အလှန်ပြောနေပုံများကို ဓါတ်ပုံ ဆယ်ပုံလောက်အမိအရိုက်ထားလိုက်သည်.. ဒီညတော့ မြတ်နိုး စောစော အိပ်သည်.. ဧည့်ခန်းထဲ computer ကျင့်နေတဲ့ ခယ်မလေးဆီကို မင်းမင်း beer ဘူးကိုင်ပြိး ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်သည်.. ”ခယ်မလေး နန်းစု.. ကိုကြိးခြေတောက်တွေညောင်းလွန်းလို့ နှိပ်ပေးပါဦး.. ” ”ဟုတ် ကိုကြိး..” အစ်ကို အရင်းသဖွယ် ဆရာသဖွယ်သဘောထားသော မင်းမင်းကို နန်းစုက ကြောက်သည်.. ရိုသေသည်..ခြေသလုံးက စနှိပ်နေသော ခယ်မလေးအလှကိုကြည့်ပြိး မင်းမင်းစိတ်တွေထန်လာသည်.. ကုန်းနှိပ်နေတော့ ညဝတ်ဂါဝန် လည်က ဟနေပြိး နို့ဖြူဖြူကိုဘော်လီပန်းရောင်နဲ့အတူတွေ့ရသည်..
ပေါင်ရင်းလောက်ထိရောက်တော့ ဘောင်းဘီတိုမဝတ်ထားတဲ့ ပုဆိုးကြား လီးကထောင်နေပြိ.. နန်းစု သတိထားမိသော်လည်း ဘာမှမပြောသေးဘဲ ဆက်နှိပ်နေလိုက်သည်.. မင်းမင်းစိတ်တွေထိန်းမရတော့ဘဲ ဂါ။န်အောက်က နန်းစုပေါင်တန်ကို လှမ်းပွတ်လိုက်သည်.. နန်းစုလည်းလှန့်သွားပြိး မင်းမင်းလက်ကို ခါချကာ အိပ်ခန်းထဲပြန်ပြေးဝင်သွားလိုက်သည်.. မင်းမင်းစိတ်ထဲမတင်မကျဖြစ် အံကြိတ်ပြိး.. အိပ်ပျော်နေသော ဇနိးလေး မြတ်နိုးကိုသာ စိတ်ကြိုက်လိုးလိုက်သည်..
မနက်ရောက်တော့ ထမင်းစားနေတုန်းမြတ်နိုးက ”သြော် ကိုမင်းရေ သန်ဘက်ခါကျရင် company က အရေးကြိးကိစ္စနဲ့ မြတ်နိုး စလုံးကိုသွားရမယ်.. နှစ်ပါတ်လောက်တော့ကြာမှာ.. အဲ့တာ န်းစုလေးကို ဂရုစိုက်ဥိးနော်.. အောက်ထပ်က ကုလားက နန်းစုနောက်လိုက်နေတာ မြတ်နိုးလည်းမကြိုက်ဘူး..” မင်းမင်းကျေနပ်စွာပြုံးလိုက်ပြိး ”စိတ်ချပါ မိန်းမရာ..” မင်းမင်း အပြုံးကမရပ်တော့ ..ခယ်မလေးက ဘာမှမပြောဘဲထမင်းသာဆက်စားနေသည်.. မြတ်နိုးကို လေဆိပ်လိုက်မပို့ခင် ကတည်းကဟမင်းမင်း ကာမအားတိုးဆေးကြိုသောက်ထားပြိးသား..
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဧည့်ခန်းဆိုဖာပေါ်နားနေလိုက်သည်.. သင်တန်းသွားရန်ခယ်မလေးထွက်လာသည်.. ချိတ်ထဘီနဲ့ ရှပ်အကျီ င်္ပါးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ နန်းစုကိုယ်လုံးက မင်းမင်းကိုစိတ်ပိုကြွစေသည်.. ”နန်းစု ခနနေဥိး. မင်းကိုပြေစရာရှိတယ်..” လေသံမာနေတဲ့ မင်းမင်းစကားကြောင့် နန်းစုလည်းခြေလှမ်းတန့်သွားသည်..”ဟုတ် ပြောပါကိုကြိး..” လက်ထဲကိုင်ထားသော ဓါတ်ပုံအချို့ကို ခယ်မလေးအားပြလိုက်သည်..ဓါတ်ပုံတွေ့တော့ နန်းစုလှန့်သွားသည်.. အောက်ထပ်က ကုလားနဲ့ နန်းစု နှစ်ယောက်တည်းပုံဖြစ်သည်.. ရိုးရိုးပုံမဟုတ်.. လင်မယားသာသာ ချစ်ရည်လူးနေပုံများဖြစ်သည်..မင်းမင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သော photoshop များပင်ဖြစ်သည်.. ”ဟာ ဒါဘာတွေလဲ မဟုတ်ဘူးနော်ကိုကြိး..” ”ဘာမဟုတ်ရမှာလည်း အဲ့လောက်ထိ လက်ပူးလက်ကျပ်မိနေတာတောင်..” ဟုတ်လည်းဟုတ်သည် ဓါတ်ပုံတွေက တကယ့် အစစ်အတိုင်းပင်.. ‘မဟုတ်ပါဘူး ကိုကြိးရယ် ဒါသက်သက်လုပ်ကြံထားတာပါ..” နန်းစု ငိုလေပြိ..” ဘာကို လုပ်ကြံရမှာလဲ..
ဒီဓါတ်ပုံတွေကို နယ်က မင်းမိဘဆီပို့လိုက်ရမလားပြော..” ”ဟင့် မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြိးရယ်..” နန်းစုတောင်းပန်ရှာသည်.. မင်းမင်းလည်းမလျှော့ဘဲ.. ”မင်းကွာ.. မိဘနဲ့ အစ်မက မင်းကိုကောင်းစေချင်လို့ ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းတက်ခိုင်းတာ..ငါ့မှာလည်းစာတွေပြပေးလိုက်ရတာ.. ခုတော့ မင်းက ကုလားလိုးတာခံနေတယ် .. စောက်ပတ်တော်တော်ယားနေလား.. ကုလားမယားဖြစ်ချင်နေတာဟုတ်လား..” ခက်ထန်လွန်းတော့ မင်းမင်းလေသံကြောင့် နန်းစု ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိတော့.. ကလေးတစ်ရောက်လိုသာ ငိုပြိး ဘူးသာခံငြင်းနေရှာသည်..မင်းမင်းကပဲဆက်ပြိး computer ဖွင့်ကာ မိမိတို့လိုးနေကို နန်းစုချောင်းကြည့်တဲ့ video file တွေဆက်ပြလိုက်သည်.. နန်းစု ဘာမှမပြောနိုင်တော့.. ”ခုမှ ငိုဘဲငိုမနေနဲ့.. ငါတို့လိုးတာတွေချောင်းကြည့်ပြိး ကုလားလိုးတာသွားခံတယ်.. ကုလားလီးတော်တော်ကြိုက်နေလား..မေးနေတာဖြေလေ.. ” ”ဟင့် မဟုတ်ပါဘူးကိုကြိးရယ်..” နန်းစုငိုပဲ ငိူနေတော့သည်..
”မင်းအစ်မ သိသွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲ.. ဓါတ်ပုံတွေ မင်းမိဘဆီပို့လိုက်ရင် မင်းကိုကုလားနဲ့ပေးစားမယ်ဆိုတာသိလား..” မိဘတွေဆီရောက်လို့မဖြစ်နန်းစု သေလိမ့်မည်.. ”မပို့နဲ့ ကိုကြိးရယ် တောင်းပန်ပါတယ်..” မင်းမင်းကျေနပ်သွားသည်.. ” အေး ငါမေးတာဖြေ မင်းကုလားမယားလုပ်ပြိး ကုလားလိုးတာခံမလား .. ငါခိုင်းတာလုပ်မလား..” ”ဟင့်.. ကိုကြိးခိုင်းတာလုပ်ပါ့မယ်..” ”အေး လာခဲ့ ငါ့နားကို..” စားပွဲပေါ်လွယ်အိပ်တင်ပြိး မင်းမင်းဆီလာခဲ့သည်.. ချိတ်ထဘီ ကွဲဝတ်ထားတော့ လမ်းလျှောက်တိုင်း ပေါင်ရင်းသားထိတွေရသည်..ရှပ်အကျီ င်္ကပါးလို့ ဗိုက်အသားဖြူဖြူလေးက လျှက်ချင်စရာ.. မင်းမင်းက ဆက်ပြိး ” မင်းစောက်ပတ်တော်တော်ယားနေလား..” ကြမ်းတန်းလွန်းတဲ့မေးခွန်းကြောက့် နန်းစုငိုနေပြန်သည်.. ”မေးနေတာဖြေလေ.” ”မယားပါဘူးကိုကြိးရယ်”..” ငါ့နားတိုးလာခဲ့” နန်းစု ကြောက်ကြောက်နှင့်တိုးလာသည်..
မင်းမင်းလည်း နန်းစုကိုယ်လုံးကိုစိုက်ကြည့် လီးကပိုတောင်လာသည်.. ထဘီပေါ်ကနေပြိး တင်းနေတဲ့ ဖင်ကို ပွတ်လိုက် ညစ်လိုက်လုပ်သည်..နန်းစု အလိုမတူသော်လည်း ကြောက်လို့သာညိမ်ခံနေရသည်.. လက်က ထဘီအောက်လျှိုဝင်ပြိး ပေါင်းသားတွေကိုပွတ်သည်.. အတွင်းခံပါးပေါ်ကနေပြိး ဖင်ကိုနှိုက်ပြန်သည်..ပြိးမှ.. ” အကျီ င်္ချွတ်လိုက်”.. နန်းစုလေးလန့်သွားသည်.. ”မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြိး ရယ် ..” မင်းမင်းစိတ်မရှည်တော့ ” မင်းကုလားကိုကျ တော့ စောက်ပတ်ပြဲအောင်လိုးခံပြိးတော့.. ငါနောက်ဆုံပဲမေးမယ်.. မင်းသဘောပဲ.. ကုလားမယားဖြစ်ချင်လား ငါလိုးတာခံမလား ဖြေ”.. နန်းစုလည်း မတတ်နိုင်တဲ့အဆုံး အကျီ င်္ကြယ်သိးဖြုတ်ကာ ချွတ်လိုက်တော့..ဘော်လီထဲမှ နို့က လျှံထွက်နေသည်.. ” ထဘီပါချွတ်စမ်း” စိတ်မရှည်ဘဲ ကိုယ်တိုင်ဆွဲချွတ်လိုက်တော့ ဘော်လီနဲ့ ပင်တီ အပန်းရောင်ဝမ်းဆက်နှင့် ခယ်မလေးကိူယ်လုံးက ထလိုးချင်စရာ..မင်းမင်း မတ်တပါထပြိး ခယ်မလေးကိုသိုင်းဖက်ကာ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်သည်…
လက်ကလည်း ဖင်ကိုပွတ်လိုက် စောက်ပတ်ကိုထိုးကလိလိုက်လုပ်သည်.. ဘော်လီချိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်တော့..နို့ဖြူဖြူကြိးနဲ့ နို့သီးခေါင်းပန်းရောင်လေးကို လျှာနဲ့ကလိပြိး စို့သည်..”အ အ” ခယ်မလေးခါးတွေကော့တက်လာသည်.. ပြိးမှပင်တီကိုချွတ်လိုက်တော့ စောက်မွေးနုတွေကြားက အပျိုစင်စောက်စိလေးက လိုးချင်စရာ.. မင်းမင်းဒူးထောက်လိုက်ပြိး ခယ်မလေးပေါင်ကြားကနေ စောက်ပတ်ကိုလျှက်နေလိုက်သည်..” မလုပ်ပါနဲ့ကိုကြိးရယ်..” မင်းမင်းဘာမှပြန်မပြောဘဲ. ဆက်လျှက်နေလိုက်သည်..စောက်စိကြားမှ အရည်တွေစီးကျလာသည်.. ”အား အင်း ဟင်း..” ခယ်မလေးညည်းသံကြောင့် မင်းမင်းကျေနပ်သွားပြိး မတ်တပ်ပြန်ထကာ ပုဆိုးချွတ်လိုက်သည်.. ဆေးရှိန်ကြောင့် လီးက ပုံမှန်ထက်ပိုကြိးပြိး မာနေသည်..ခယ်မလေးလက်ကိုယူကာ လီးပေါ်တင်ထားလိုက်သည်.. နန်းစုလည်း ကိုင်ပြိး ဂွင်းတိုက်သလို လုပ်ပေးကာ မင်းမင်း စုပ်နမ်းတာခံလိုက်.. နို့စို့တာခံလိုက်နဲ့ ပြုသမျှနုနေရသည်..
” မင်း ထိုင်ချလိုက်.” နန်းစုကိုထိုင်ခိုင်းပြိး ပါးစပ်နားလီးတေ့ပေးလိုက်သည်..မမအလိုးခံတာ မြင်ဖူးနေသောကြောင့် လီးစုပ်ခိုင်းမှန်းသိသည်.. လီးတံကိုငုံကာ စုပ်ပေးလိုက်သည်.. မင်းမင်းလည်းကောင်းလွန်းသောကြောင့် ပါးစပ်ကို ဆက်တိုက်လိုးနေလိုက်သည်..ပြိးမှ နန်းစုကိုဆိုဖာပေါ်အိပ်ခိုင်းလိုက်သည်.. စောက်ရည်ရွှဲနေတဲ့ စောက်ပတ်ဝကို လိးကြိးတေ့ပြိး ထိုးထည့်လိုက်သည်..”ဗြစ် ဗြစ်.. အား နာတယ် ကိုကြိးရ..” သွေးတွေထွက်လာသည်..မင်းမင်း ဘာမပြောဘဲ ဆက်တိုက်နာနာလေးလိုးလိုက်သည်.. အစ်မလည်းလိုး ခယ်မဖြူဖြူချောချောလေးကိုလည်း ပါကင်ဖေါက်ပြိးတက်လိုးရသောကြောင့် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်နေသည်.. နို့လုံးလုံးလေးကို ကုန်းစို့ပြိး အချက် လေးငါးဆယ်လောက်စောင့်လိုးကာ သုတ်ရည်တွေပန်းထည့်လိုက်သည်..
တစ်ချီပြိးသွားသော်လည်း လိးကမသေသေး.. ခယ်မမျက်နှာပေါ်ပြောင်းပြန်တက်ခွပြိး 69 shape နဲ့ လီးစုပ်ခိုင်းပြန်သည်.. စောက်စိထဲလျှာနှင့်ဆွဲစုပ်လိုက်သည်.. ခယ်မလေးပါးစပ်ကိုလည်း လိုးရင်း လရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်သည်..ပက်လက်အနေထားဖြစ်နေတဲ့ခယ်မလေး က လရည်အကုန်မြိုချလိုက်ရသည်.. မင်းမင်းက မပြိးသေး.. အခန်းထဲသွားပြိး ဖင်လိုးတဲ့ gel ဘူးယူလာသည်.. ခယ်မလေးကိုဖင်ကုန်းခိုင်းသည်.. ဖင်ဖြူကြိးကိုမြငိတော့ မင်းမင်း လီးက ပိုတောင်လာသည်..ဖင်တုံးကိုလက်ဖြင့်ရိုက်ချလိုက်သည်.,”ဖြန်း ဖြန်း” ဖင်ခါသွားသည်..ဖင်ကုန်းနေတဲ့ခယ်မလေူး ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြိး စောက်ပတ်ကိုထပ်လျှက်သည်.. ပြိးမှ တောင်လျှောက် စအိုဝကိုပါ လျှာနဲ့လျှက်ပြိးထိုးကလိလိုက်သည်..
”အား ကိုကြိးရယ် ဟင့်”.. စအိုဝဆီလူးပြိး လီးထိုးထည့်လိုက်သည်.. ”ဗြစ် ဗြစ်..အား နာလိုက်တာကိုကြိးရ” မင်းမင်း ဆက်တိုက်စောင့်လိုးနေသည်.. စောက်ပတ်ကောင်းသလောက် ဖင်လည်းလိုးလို့ကောင်းသော ခယ်မလေးပင်.. ဖင်ကြိးကို ဖြဲပြိး ဆက်တိုက်စောင့်လိုးကာ.. တစ်ချီထပ်ပြိးသွားပြန်သည်…အားကုန်သွားတော့ နို့ကိုင်ပြိး ခယ်မလေးကိုသာ အနမ်းခြွေီနလိုက်သည်.. မြတ်နိုးပြန်မလာခင်အထိတော့ ခယ်မလေးက မြတ်နိုးအစား နေ့တိုင်းအလိုးခံရသည်.. မြတ်နိုးပြန်လာပြိးနောက်ပိုင်းလည်း ခယ်မလေးနဲ့ ခိုးခိုးပြိးလိုးဖြစ်ကြသေးသည်။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged နနျးစု